RAVELONANOSY MAMY TIANA : RAHA TSY TANTERAKA NY ANDININY FAHA 20 TSY MIVAHA NY KRIZY – MyDago.com aime Madagascar
Anisan’ny raharaham-pirenena ny fiarovana ny tanintska hoy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana androany teny amin’ny Magro Behoririka satria ny fiandrianam-pirenena no kitihan’ny frantsay. Isaorana hoy izy ny Gtt nanao ireny hetsika tany Paris ireny, na dia nangatsiaka aza dia tonga maro. Misy anjarantsika hoy Mamy Tiana ny fanohizana ny hetsika. Manomboka rahampitso ka hatramin’ny fanaovana sonia taratasy dia hisy ny fivoriana ho an’ireo fikambanana sy ny Cst sy Ct. Ny anton’ny taratasy hoy izy dia hametrahana fanontaniana amin’ny lafrantsa hoe inona ny asan’ny ambasadaoro. Raha ny lalàna dia tsy anjarany loatra ny miteny ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc. Ny voalazan’ny tondrozotra hoy ity mpanao politika ity dia mazava fa mody tsy misy fepetra, fa raha ohatra izy miteny izany dia mandika ny tondrozotra. Hangatahantsika hoy izy ny frantsay hoe raha misy sazy hoy an’ity ambasadaoro ity dia sazio. Ireo no raikatina amin’ilay taratasy. Noho izany hoy Mamy Tiana dia hisy ny fanaovana sonia ataontsika vahoaka eto, ka amin’izay fotoana izay dia izahay rehetra no tompon-kevitra amin’io taratasy io. Ankoatra izay dia nambarany fa misy ny sehon-javatra samihafa ankehitriny hoe tetezamita, tondrozotra sns. Tsotra ilay izy hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity, ny olona tsy mapnaran-dalàna dia manaraka lalàna. Ny antsika dia ny tondrozotra io no ampiharina.. Ny frantsay hoy izy tsy te hamaha ny krizy fa mitady lalana hafa. Raha tena te hijery ny hoavin’ny Malagasy dia ny fampiharana ny tondrozotra no atao. Noho izany hoy Mamy Tiana dia miantso ny Sadc isika hoe raha tiana handeha sy hotanteraka ny fifidianana dia ny tondrozotra ihany. Momba ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc dia nilaza izy fa ny Ankolafy Ravalomanana matoa izy nanao sonia ny tondrozotra indrindra ny andininy faha 20 ka raha io no tsy tanteraka dia tsy mivaha ny krizy. Noho izany dia mbola mitohy ny tolona mandram-pahatongan’ny filoha Ravalomanana Marc eto.
RAVELONANOSY MAMY TIANA : TSY MAHAFEHY FANJAKANA NY OLONA AO AMIN’IO FITONDRANA IO
Ankolafy Ravalomananana : « hiala tanteraka amin’ny tondrozotra raha tsy… »
Auteur Solo Razafy*Publié le 18 mars 2013 18 mars 2013 Catégories Politique
4 réflexions sur « RAVELONANOSY MAMY TIANA : RAHA TSY TANTERAKA NY ANDININY FAHA 20 TSY MIVAHA NY KRIZY »
18 mars 2013 à 18 h 48 min
Te hiteny am ireto mpikabary eto am magro ireto aho hoe mandehana maka lesona any Mandritsara ,na any Ambohipo fa akaiky eo!aza be resaka lavareny eo am magro fotsiny!efa fantatray fa tsy hietsika ianareo satria tsara karama sy be indemnités!fa aza ferana tsy mahazo mivoaka ny kianja ny olona!
EFA NY LOHANY NO MATSANTSO dia aza manantena,
MBOLA MIASA MAFY NY SASANY HANDRAVANA NY TOLONA,
efa tsy izy intsony ireo kah!!efa kely sisa mihazona ny lohany angamba,asa aiza no misaina
fa dia eieiei…. misy efa tokony hiala mihintsy ao fa MANIMBA NY TOLONA FOTSINY, hatomboka
@ kotovelo efa BOLOKIN’NY FRANTSAY ho HASOLONY An’i domelina.ß
Dia lasa resabe fotsiny fa tsy misy hapoaka mihitsy. Toa manao resaka ambony latabatra fotsiny ity izy. Inona izao no tsy hiarahana @ GSCC ? Fa maninona no tsy tanterahina ny tenin’I Dada hoe miraisa hina. dia mba miaraka @ ireo VOT, VAFI, Pro-Ravalomanana sns.. ireo. Sa ilay firaisakiana dia ny fiarahana @ ry Riana Andriamandavy ?
Hamerina an’i Dada tokoa ve ianareo ? mba lazao aza hoe inona no asa vita t@ ity volana mars ity ? I Mamy Rakotoarivelo dia toa lasa mpanao « oui m’sie' » ny mpanogam-panjakana fotsiny. Aiza ilay asa mivaigana ?
Raha ny marina dia efa fantatr’ireo Zanak’i Dada ireo fa misy mpitarika mpamadika sy tsy mahavao ao ka rehefa misy hetsila lehibe ihany ry zareo vao tonga ohatra ny fitsenana ny filoha. Tsy midika izany fa manaiky an-dRy Mamy Rakotoarivelo tia seza izany.
Ary itony, andininy fahafiry ao amin’ny Tondrozotra ?? Gestion des affaires courantes ve izao ?
Lasan’ilay Tozzi Green ny 10 000 Ha ! Hanaovana inona ary iza no nanome halàlana ?
Ny fantatray dia toa ny Ministry ny fambolena no miandraikitra ny momban’ny « domaine » !
Précédent Article précédent : Naverina amin’ny taniny ny Jodasy !
Suivant Article suivant : Andian-tsary : fitetezam-paritra nataon’ny Ankolafy Ravalomanana notarihan’ny Mamy Rakotoarivelo